Ala Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe na Ihe Nlereanya nke Otu Web Ga - esi Nyere Aka | Martech Zone
N’ọnwa a ka anyị hụrụ ọhụụ dị ala maka onyogho onyonyo igwe onyonyo. M na-a na-akatọ nke mainstream media, nọrọ m afọ iri mbụ nke ahịa na akwụkwọ akụkọ azụmahịa. Enwere ihe ịrịba ama nke mgbanwe n’ebe ndị ọzọ, agbanyeghị. Na Ọwa Sci Fika ihe atụ, na nso nso a ka biputere ihe Online Pilot maka ihe osise ohuru, Amatụgharị Ihe Na-atụ n’anya. Ha jikọtara onye na-anya ụgbọ elu na Survey gbasara ihe nkiri ahụ. (Ọ bụrụ na ị nweta ohere, lelee nkeji iri abụọ na abụọ pilot ma ọ na-atọ ọchị ma na-akpali akpali, echere m na olu ndị ị ga-amata ga-eju gị anya.)
Nke a bụ n'ezie ihe izizi iji tinye web rụọ ọrụ zuru oke. Cheedị ma ọ bụrụ na netwọkụ zigara ndị ọkwọ ụgbọ ha niile na weebụ wee nye ndị mmadụ ohere ilele ma votu maka ihe na-eme ka ọ banye n'oge ọhụrụ. You cheghị na ihe ngosi a na ahịa ndị na-ekiri ihe ga-akawanye mma? Eche m! Agbanyeghị, enwere ndị isi ụlọ ọrụ ahụ kwenyere na ha 'maara nke ọma' ma ha maara ihe mụ na gị ga-achọ. Hmmm, ijide n'aka.
Kedu ka m siri mata banyere Amazing Screw-On Head? N'ụzọ dị egwu, site na Digg. Digg bụ nnukwu ebe ndị folks nyefere akụkọ ma hapụ ha ka ha kwuo ma ha "digg" akụkọ ahụ. Otutu "digg" votu, ihe di elu ka edemede a na elu. Ọzọkwa, Digg nwere akụkụ obodo, ebe m nwere ike ịhụ ụdị edemede ndị enyi m 'digg'. Nke a bụ nnukwu ojiji nke Weebụ. Enwere m olileanya na telivishọn telivishọn nwere ike ịmụta ihe na nke a!
Tags: ịtụnanya ịghasa-na isiigwunyochatelivishọn